Aammin Ruuxa Quduuska ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Mid ka mid ah odayaashayada ayaa dhowaan ii sheegay in sababta ugu weyn ee uu u baabtiisay 20 sano ka hor ay tahay sababta oo ah wuxuu rabay inuu helo awoodda Ruuxa Quduuska ah si uu uga adkaado dembiyadiisa oo dhan. Ujeeddadiisu way wanaagsanayd, laakiin fahamkiisa ayaa yaraa cillad (Dabcan, qofna ma leh faham dhameystiran, waxaan ku badbaadi doonnaa nimcada Eebbe, inkasta oo aan is fahansiinno).
Ruuxa Quduuska ahi ma aha wax aan si fudud u noqon karno oo aan "rogrogno" si aan u gaarno “himilooyinkayaga ka sarreeya”, nooc ka mid ah kuwa awoodda weyn u leh awooddeena. Ruuxa Quduuska ahi waa Ilaah, isaguu inala jiraa innagana inala jiraa, wuxuu ina siiyaa jacayl, hubaal iyo wada noolaansho uu Aabbuhu inoo ina siiyo xagga Masiixa. Masiixu wuxuu ku abuuray Aabbaha carruurtiisa, Ruuxa Quduuska ahna wuxuu ina siinayaa dareenka ruuxiga ah si tan loo aqoonsado (Rooma 8,16). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina siinayaa iskaashi dhow oo aan la lahaanno Ilaah xagga Masiixa, laakiin taa uma diidineyso awooda aan u leenahay dambiga. Waxaan wali lahaan doonnaa damacyo qaldan, ujeeddo khaldan, fikrado qaldan, erayo qaldan iyo ficil.
Xitaa haddii aan rabno inaan ka tanaasulno caado gaar ah, waxaan ogaanay inaanan awoodin inaan sidaas samayno. Waan ognahay in doonista Ilaah ay tahay in aan ka baxno dhibaatadan, laakiin sabab ahaan awgood waxaan wali u muuqanaa kuwa aan awood u laheyn inaan ka takhalusno saamaynta ay nagu leedahay.
Miyaynu rumaysan karnaa in Ruuxa Quduuska ahi si dhab ah uga shaqeynayo nolosheena - gaar ahaan markay u muuqato inaysan waxba runtii ka dhicin maxaa yeelay annagu ma nihin "Masiixiyiin" aad u wanaagsan? Haddaynu sii wadno halista dembiga, markay umuuqato inaanay wax badan iska beddelayn, ma waxaynu ku soo gabagabaynaynaa inaynu jabnay oo xitaa Ilaah uusan xallin karin dhibaatada?
Dhallaanka iyo dhalinyarada
Markii aan rumaysadka ugu nimaadno Masiixa, mar labaad ayaynu dhalannay, oo uu Masiixu mar kale abuuray. Waxaan nahay abuur cusub, dad cusub, dhallaanka ku jira Masiix. Ilmuhu awood ma leh, ma haystaan ​​xirfado, iyagu isma nadiifiyaan.
Markay weynaanayaan, waxay bartaan xirfadaha qaarkood waxayna bilaabaan inay ogaadaan inay jiraan waxyaabo badan oo aysan qaban karin, taasoo mararka qaarkood horseedda jahwareer. Waxay ku jajabtaan qalloocinta iyo maqasyada, iyagoo ka walwalaya inaysan sameyn karin sidoo kale qof weyn. Laakiin jahwareerka ma caawin doono - waqti iyo tababar ayaa kaliya caawin doona.
Tani waxay sidoo kale khusaysaa nolosheena ruuxiga ah. Mararka qaar dhalinyarada Masiixiyiinta ah waxaa la siiyaa xoog la yaab leh si ay ula jaan qaadaan balwadda daroogada ama xanaaq kulul. Mararka qaar dhalinyarada Masiixiyiinta ah si dhaqso ah ayey u yihiin “khasnad” kaniisada. Ka dib marar badan, waxay umuuqataa in Masiixiyiintu kula dagaallamaan dembiyo la mid ah kuwii ka horreeyay, waxay leeyihiin shakhsiyad isku mid ah, cabsi isku mid ah iyo jahwareer. Iyagu ma ahan kooxo waaweyn oo xagga ruuxa ah.
Waxaa naloo sheegay in Ciise ka adkaaday dembiga, laakiin waxay umuuqataa in dembigu wali ku haysto awooddiisa. Dabeecadda dembiga ee nagu dhex jira waa la jebiyay, laakiin weli waxay noola dhaqmeysaa sidii annaga oo ah maxbuuskiisa. Annaguna dadkayagii murugaysan nahay! Yaa inaga badbaadi doona dembiga iyo dhimashada? Ciise dabcan (Rooma 7,24-25). Horay ayuu u guuleystay - isaguna guushan ayuu ka dhigay guul.
Laakiin wali ma aragno guusha dhammaystiran. Weli ma aragno xooggiisa dhimashada, ama dhammaadka dembiga ee nolosheena. Sida Cibraaniyada 2,8 leeyahay, wali ma aragno wax kasta oo cagteenna hoosteen ku jira. Waxaan qabanno - waxaan aaminsanahay Ciise. Waxaan aaminsanahay eraygiisa inuu ku guuleystey waxaanan aaminsanahay eraygiisa oo ah inaan sidoo kale isaga ku guuleysaneyno.
In kasta oo aan ognahay in aan nadiif nahay oo nadiif ku nahay Masiixa, waxaan jeclaan lahayn in aan aragno horumar xagga ka adkaanta dembiyadeena shakhsi ahaaneed. Habkaani wuxuu u muuqan karaa mid si aad ah tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu yimid, laakiin waxaan ku kalsoonaan karnaa Ilaah inuu sameeyo wixii uu ballanqaaday - annaga iyo sidoo kale kuwa kale. Ka dib oo dhan, maahan shaqadeenna. Waa ajandehiisa, maahan annaga. Haddii aan Ilaah u tukanno, waa inaan diyaar u nahay inaan isaga sugno. Waa inaan diyaar u nahay inaan aaminno isaga inuu shaqadiisa nagu qabto dariiqa iyo xawaaraha uu u maleeyo inay saxsan yihiin.
Dhalinta aan qaangaarka ahayn badiyaa waxay moodayaan inay ka aqoon badan yihiin aabahood. Waxay u maleynayaan inay ogaadaan waxa noloshu ku saabsan yahay iyo inay wax walba si fiican ugu qaban karaan kaligood (Dabcan, dhallinta qaan-gaarku dhammaantood maahan sidan oo kale, laakiin hal-ku-dheggu wuxuu ku saleysan yahay caddeyn qaar).
Annaga Masiixiyiinta ah waxaan mararka qaarkood uga fikiri karnaa qaab u eg dhalinyarada. Waxaan bilaabi karnaa inaan ka fikirno in ruuxiga "ku koraya" uu ku saleysan yahay dabeecad sax ah, taas oo ina hogaamineysa inaan ka fikirno in booska aan Ilaah ku horreyno ay kuxiran tahay sida aan u dhaqanno. Haddii aan u dhaqanno si wanaagsan, waxaan ku muujin karnaa u janjeerida dadka kale ee aan ugu fiicneyn sida aan nahay. Haddii aan si wanaagsan u dhaqmin, waxaan ku dhici karnaa rajo xumo iyo niyad jab waxaanan aaminsanahay inuu Ilaahay naga tegey.
Laakiin Ilaah na ma weydiisto inaan nafteena ka dhigno kuwo hortiisa hortiisa xaq ku ah; Wuxuu inaga codsanayaa inaan aaminno isaga, kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn (Rooma 4,5) kan ina jecel oo badbaadiya Masiix aawadiis.
Markii aan Masiixa ku koray, waxaynu ku sii kalsoonahay jacaylka Ilaah, kaasoo innagana lagu muujiyey jidka ugu sarreeya Masiixa (1 Yooxanaa 4,9). Maaddaama aan ku nasanno, waxaan sugeynaa maalinta lagu qeexay Muujintii 21,4: «Ilaahna wuxuu ka tirtiri doonaa ilmo kasta oo indhahooda ah, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, mana jiri doontid xanuun, oohin ama xanuun badan. ; maxaa yeelay kii hore wuu dhaafay.
Markuu maalintaas yimaado, Bawlos, isla markiiba waa nala beddeli doonaa. Waxaa laga dhigi doonaa mid aan dhiman karin, aan kala go 'lahayn, oo aan laga maarmi karin (1 Korintos 15,52-53). Ilaah wuxuu soo furtaa ninka gudaha ah, maahan oo keliya ninka dibadda ah. Waxay wax ka beddelaysaa waxa gudahayaga ah, laga soo bilaabo daciifnimada iyo karti darrada ilaa faanka iyo, tan ugu muhiimsan, dembi la'aanta. Iyada oo la adeegsanayo dhawaaqa buunka ugu dambeeya, ayaan waqti lagu beddeli doonaa. Jidhkeenna waa la soo furtay (Rooma 8,23), laakiin xitaa intaa ka sii dheer, waxaan ugu dambeyntii arki doonaa nafsadeena sida Ilaah inaga yeelay Masiixa (1 Yooxanaa 3,2). Waxaan markaa ku arki doonaa si cad oo xaqiiqada ah oo aan wali muuqan oo Ilaahay ku abuuray Masiixa.
Dabeecaddeenii hore ee dembiga ahayd ayaa Masiixu adkaaday oo burburiyey. Runtii way dhimatay, "Bawlos baa yidhi, waayo, waad dhimatay, noloshiinnuna Masiixay ku qarsoon tahay Ilaah." (Kolonel 3,3). Dembiga aan “si fudud u duubnay” oo aan "isku dayayno inaan daadino" (Cibraaniyada 12,1) qayb kama aha ninka cusub ee aan ku jirno Masiixa si waafaqsan doonista Ilaah. Waxaan ku leenahay nolol cusub Masiixa. Markuu Masiixu yimaado, ugu dambeyntii waxaan isu arki doonnaa nafteenna sidii Aabbaha noogu abuuray Masiixa. Waxaan arki doonnaa nafteena sida runtii aan nahay, kaamil ahaan xagga Masiixa, kaas oo ah nolosheenna dhabta ah (Kolosay 3,3: 4). Sababtaas awgeeda, mar hore ayaannu u dhimannay oo aan Masiixa la galnay, waan dilnaa " (Aayadda 5) waxa dunidu innaga dhex taal.
Kaliya waxaan ka adkaaneynaa Shayddaanka iyo dembiga iyo dhimashada si keliya - annaga oo ku marineynaa dhiigga Wanka (Muujintii 12,11). Guushii Ciise Masiix uu ka gaadhay iskutallaabta dusheeda ayaa ah inaan ku guuleysanay dembiga iyo dhimashada, ee ma ahan halganka aan kula jirno dembiga. Halgankayaga aan ka galnay dembiga waa muujinta xaqiiqada ah inaan ku jirno Masiixa, inaanan mar dambe ahayn cadawga Ilaah, laakiin saaxiibbadiis, iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah ee lala wadaago isaga, kan inaga shaqeeya annaga, diyaarna u ah oo fulinaya raalli ahaanshaha Eebbe (Filiboy 2,13).
Halgankayaga aan la galno dembiga ma ahan sababteena xaqnimada Masiixa ku jirta. Isagu ma keeno quduusnimo. Jacaylka uu Ilaah noogu qabo xagga Masiixa ayaa ah sababta, waana sababta kaliya ee loo helo xaqnimadayada. Waxaan xaq ku nahay, wuxuu Istaraatiika ku siiyay Masiixa dhammaan dembiyada iyo cibaado la’aanta oo dhan, maxaa yeelay Ilaah waa kaamil jacayl iyo nimco - sabab kale mooyee. Halgankayaga dembiga ayaa ah waxsoosaarka iyo cadaalad darada uu Masiixu ina siiyay, ee maaha sababteeda. Masiixu wuxuu u dhintay annaga oo weli dembilayaal ah (Rooma 5,8).
Waan necnahay dembiga, waxaan la dirirnaa dambiga, waxaan dooneynaa inaan ka fogaano xanuunka iyo silica uu dembigu sababay innaga iyo kuwa kale maxaa yeelay Ilaah wuxuu inaga dhigay mid ku nool Masiixa oo Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex shaqeeyo. Sababtoo ah waxaan ku jirnaa Masiixa, waxaan la dagaallameynaa dembiga "si fudud noogu duuban" (Cibraaniyada 12,1). Laakiin kuma guuleysan karno dadaalkeenna, xitaa annaga oo aan ku dirin dadaalkeenna uu ina siinayo Ruuxa Quduuska ahi. Waxaynu ku guuleysanaa dhiiga masiixa, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa oo ah wiilka ina Ilaah, Eebbe jidh ahaan.
Ilaah wuxuu marwalba ku sameeyay wax walba oo kujira Masiixa taasi oo lagama maarmaan u ah badbaadadeenna isaguna wuxuu horay noogu siiyay waxkastoo aan ugu baahan nahay nolosha iyo cibaadada, ayagoo si fudud noogu yeeraya inaan ku aqoonsano Masiixa. Kaliya waa uu sameeyay sababtoo ah aad ayuu u fiican yahay (2 Butros 1, 2-3).
Kitaabka Muujintii wuxuu inoo sheegayaa in ay jiri doonto wakhti ay jiri doonto qaylo, ilmo, xanuun, iyo xanuun - oo taa macnaheedu yahay dembi dambe ma jiri doono maxaa yeelay waa dembi, silica keena. Si lama filaan ah, daqiiqad yar, gudcurka wuu dhammaan doonaa, dembiguna mar dambe awood uma yeelan doono inuu naga dhigo kuwa aan ka fikirno inaan weli maxaabiis ahaanno. Xoriyadeena dhabta ah, nolosheena cusub ee Masiixa, waxay kula iftiimin doontaa isaga sharaftiisa weligiis. Dhanka kale, waxaan aaminsanahay erayga ballanqaadkiisii ​​- waana wax aan runtii ka fikirno.